Ihlazo iSafa yethula umqeqeshi weBafana nge-Laptop - Ilanga News
Home Ezemidlalo Ihlazo iSafa yethula umqeqeshi weBafana nge-Laptop
Ihlazo iSafa yethula umqeqeshi weBafana nge-Laptop
Umqeqeshi ubengezwakali kahle ukuthi uthini
IHLAZO inhlangano eyengamele ibhola kuleli iSouth African Football Association (Safa) yethula umqeqeshi omusha weqembu lesizwe lakuleli iBafana Bafana.
ISafa imemezele uHugo Broos (69) (osesithombeni) waseBelgium njengomqe-qeshi omusha weBafana kwisithangami sabezindaba ebesiyizolo ngoLwesithathu emini eSafa House, eNasrec, eGauteng.
ISafa ike yagxekwa ngabathandi bebhola njengoba ibilokhu ihlehlisa ukumemezela umqeqeshi omusha weBafana emuva kokuba ikhombe indlela uMolefi Ntseki.
Ibilokhu ibamba iyeka, kubonakala ukuthi ayazi ukuthi izoqasha bani.
Nokho iSafa yethula uBroos izolo kuvele ubuhlathi obusezingeni eliphezulu njengoba kucacele ngisho ingane encane ukuthi bezingekho izinhlelo zobuchwepheshe ukuze kuxhunywane kahle nalo mqeqeshi obengekho kulesi sithangami.
UBroos ushayelwe nge-laptop ebingazwakali kahle. UMengameli weSafa uDa-nny Jordaan uze wathatha eminye yemi-bhobho yokukhuluma wayibeka esiphikhe-ni se-laptop wabe esebuza umqeqeshi ukuthi ngabe uyezwa yini.
Lo mqeqeshi uthe uyezwa kodwa uma ekhuluma ubengazwakali kahle.
UMengameli weSafa ubonakale esenza umsebenzi wokuba ngumxhumanisi wale nhlangano nabezindaba njengoba kungu-yena obesehloma lo mqeqeshi imibuzo.
Okucacile ukuthi le nto ibingahlelelwe kahle uJordaan utshele lo mqeqeshi ukuthi usesithangamini sabezindaba wathi ku-gcwele izintatheli kuzwa izwe lonke.
Ngesikhathi lo mqeqeshi ephendula kodwa engezwakali kahle, uJordaan ube esezwakala ehlebela isikhulu esiphezulu seSafa uTebogo Motlanthe ethi asizame ukumfonela ngqo lo mqeqeshi.
UMotlanthe uzamile kodwa emuva kwe-sikhashana wazwakala ehlebela uJordaan ukuthi lo mqeqeshi akalubambi ucingo.
Kunokuba uJordaan noMotlanthe baza-me eminye imizamo bavele bamuyeka lo mqeqeshi wathemeleza engazwakali kahle kunjalo kwaze kwabe uyaqeda ukukhuluma.
Lesi senzo siyifake kwelikhulu ihlazo le nhlangano njengoba kuyiyona engabapha-thi bebhola laseNingizimu Afrika ukuthi inkulu kangaka isingahlulwa wukuhlela uhlelo lwesimanje lokubamba imihlangano i-Zoom okuyilona olusetshenziswayo kulezi zinsuku.
UJordaan obebonakala ukuthi usehlazweni uxolisile wabe esethi lo mqeqeshi uzotheleka ngelizayo kuleli lapho ezobe esebuzwa khona imibuzo ngomsebenzi wakhe omusha.
Nasezinkundleni zokuxhumana iSafa ibilokhu iphendulwe ihlaya ngalesi senzo.
Nokho kubona lobo buhlathi uBroos onqobe i-Afcon neCameroon ngo-2017 uthembise lukhulu.
“Ngiyajabula ukuthi sengizoba ngu-mqeqeshi weNingizimu Afrika.
“Kungimangazile ukuqokwa kwami kodwa ngizimisele ukuletha izinguquko. Ngifuna ukufaka abadlali abasebencane eqenjini lesizwe.
“Kodwa-ke njengamanje into emqoka wukufaka leli qembu emqhudelwaneni weNdebe yoMhlaba. Noma kanjani ngizokuqinisekisa ukuthi kuyenzeka lokho yize umkhulu umsebenzi ongihlalele,’’ kusho uBroos.
Previous article‘Yimina unkosikazi osemthethweni weSilo’
Next articleUmisiwe u-Ace Magashule